Global Voices teny Malagasy » Kazakhstan: Ireo Vovonana Bilaogy Miha-Voasivana Bebe Kokoa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Septambra 2018 12:55 GMT 1	 · Mpanoratra Adil Nurmakov Nandika (fr) i Smalto Kabuya, Sylvia Aimée
Sokajy: Kazakhstan, Fahalalahàna miteny, Mediam-bahoaka, Politika, Teknolojia
Ireo blaogy eo amin'ny mail.ru – vavahadin-tserasera rosiana iray malaza amin'ny fampitambaovao, ny fialamboly sy ny imailaka, no faharoa nanjary niharan'ny sivana tao Kazakhstan, taorian'ny LiveJournal. Ny fidirana amin'ireo blaogy irery ihany no sivanina amin'ny alalan'ilay mpandraharaha nasionaly momba ny fifandraisadavitra, miasa tsy misy olana kosa ireo tolotrasa rehetra hafa eo amin'ilay vovonana. Mety ny fidirana amin'ilay faritra natao ho an'ny blaogy raha ampiasàna ‘proxy’ mba tsy hitononana anarana an'ireo fidirana ny aterineto.
Amin'ny ankapobeny, heverina fa ny Livejournal (ny Kazakhtelecom dia tsy niaiky mihitsy ho nanivana an'io vohikala io) dia niharan'ireo ady politika ifanaovan'ireo tomponandraikitra sy i Rakhat Aliev, vinanto fahinin'ny Filoha ary nandositra azy ankehitriny, olona mpandraharaha goavana eo amin'ny sehatry ny media, voaheloka hifonja 40 taona noho ny fakàna ankery sy fanomanana fanonganam-panjakana. Manana blaogy roa na telo izy ao amin'ny LiveJournal.
Saingy tena mbola sarotra avahana ireo antony nanivanana amin'ny ampahany ny blogs.mail.ru. Ny mahazatra, tsy mametraka zavatra firy loatra momba azy ireo blaogy ireo ary omena avy hatrany izay olona manana adiresy imailaka. Tsy fantatra izay mpanohitra ao, ary, mety ho, tsy manana blaogy ao i Rakhat Aliev. Koa nahoana no tsy maintsy nosakanana ilay izy? Moa ve io ka politikam-piarovana an'ireo vovonana fanaovana blaogy eo an-toerana, izay tena mpanara-drenirano? Tsy misy mahalala.
Ny tena mahaliana dia ny andro voalohany nisian'ny fanivànana ny blogs.mail.ru, nisy olona iray nanandrana nanokatra kaonty tamin'ny anarana rakhataliev teo amin'ny vovonan'ireo blaogy eo an-toerana nitondra ny anarana hoe yvision.kz. Ora iray na roa taty aorian'io, voafafa io kaonty io. Saingy sarotra ny haminany hoe i Aliev tenany ihany io na ny manodidina azy.
“Lalana tsara io, ry namako!!!”: mitanisa  izay nolazain'i Vladimir Lénine [teny rosiana] ny blaogera megakhuimyak :
“Hitondra ho amin'ny fankalazàna goavambe an'Andriamatoa Aliev ny paranoïa an'ny masoivohom-baovao sy ny Serasera, ary henatra goavana ho an'ny firenena sy ireo mpitondra azy. Tokony hametra-pialàna tsy hiasa ao mandrakizay daholo ny mpiasan'ilay masoivoho. Rehefa ny firenena no manana karazana “sakaiza” sahala amin'ireo, vokatr'izay, tsy ilaina akory ny hananany fahavalo”.
Maneho ny ahiahiny  amina esoeso mafaitra i Eev ary matahotra fa ato ho ato ny fidirana amin'ny aterineto dia ho zaraina amin'ny endrika isa voafetra – sahala amin'ny siramamy nandritra ny perestroïka. Manao hatsikana mampalahelo  ny Cyber-gorynych ary matahotra fa raha mbola mitohy ilay fanao, tsy ho tafita intsony ny fahazoana vaovao ao Kazakhstan raha tsy resaka filazàna toetrandro sisa: “Mitendry fikarohana iray ianao ao anatin'ny milina fitadiavana ety an-tambajotra, alefanareo ny fangatahanareo, ary ny valiny miverina aminao dia manome soso-kevitra hoe “: “Miala tsiny, tsy misy zavatra hita. Mikaroka ny toetrandro ve ianao?” [teny rosiana].
Mampitaha an'ireo zava-misy  amin'ny raharaha LiveJournal ny Programmila [teny rosiana]:
Mitovy hatrany ny sarisary… maimbo ohatran'ny havendranana io. Tena marina, rehefa miady hevitra mikasika ny havendranana sy ny Masoivohom-baovao sy ny Serasera ny olona, tsy manome ny hevitro akory aho… amin'izao fotoana izao, mihevitra ny hanangana lohamilina kely mpanome DNS avy any an-trano aho.
Tahaka izay miseho amin'ny manjo ny vovonan'ireo blaogy LiveJournal, voasivana avokoa ny vavahadin-tserasera rehetra, fa tsy ny URL (adiresy aterineto) “mampisy olana”. Amin'ity indray mitoraka ity, vitan'ireo mpanao sivana ny nanivana fotsiny an'ireo blaogy blogs.mail.ru. Araka ny voalazan'ireo manampahaizana, io dia vokatry ny fanasivanana ao Kazakhstan izay ampiharina amin'ny fomba tena raitra – avy amin'ny alalan'ny adiresin'ny lohamilina. Mitondra fantsona sy lohamilina marobe ny vovonana mail.ru, ary ny an'ireo blaogy dia mipetraka amina lohamilina iray mitokana.
Navoaka ihany koa tao amin'ny neweurasia  ity lahatsoratra ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/09/06/125699/
 Manao hatsikana mampalahelo: http://cyber-gorynych.livejournal.com/
 Mampitaha an'ireo zava-misy: http://programmilla.livejournal.com/145151.html